Nsọpụrụ ụbọchị: ekpere gị nke Jenụwarị 17, 2021 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Nsọ nke ụbọchị: ekpere gị nke Jenụwarị 17, 2021
“M ga-abụku Jehova abụ n’oge niile m dị ndụ; M ga-abụku Chineke m ukwe ogologo ndụ m niile. Ka ntụgharị uche m mee ya obi ụtọ, ka m na a rejoiceụrị n'ime Onyenwe anyị ". - Abụ Ọma 104: 33-34
Na mbụ, enwere m ọjoụ nke ukwuu banyere ọrụ ọhụrụ m nke na enweghị m mmasị na njem ogologo, mana ka ọ na-erule izu nke atọ, nchekasị nke ịnya ụgbọ ala na-ebu m ike. Ọ bụ ezie na amaara m na ọrụ nrọ m bara uru ma anyị na-eme atụmatụ ịbịaru nso na ọnwa 6, ụjọ tụrụ m ịbanye n'ụgbọala. Ruo otu ụbọchị, achọpụtara m otu aghụghọ dị mfe nke gbanwere omume m.
Nanị ịgbanye egwú nzuzo mere ka m nwee mmụọ ma mee ka ịnya ụgbọ ala tọkwuo ụtọ. Mgbe m sonyere ma bụọ abụ n’olu dara ụda, echetakwara m ọzọ ekele m nwere maka ọrụ m. Echiche m banyere ndụ mere ka ọ dịrị m mfe ịgagharị.
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ekele gị na ọ joyụ gị nwere ike ibute ngwa ngwa n'akụkụ mkpesa na echiche dara ogbenye "ahụhụ nye m". Mgbe anyị na-atụgharị uche n’ihe ọ bụla na-ezighi ezi na ndụ anyị, ibu anyị na-ebuwanye ibu ma nsogbu anyị dịka ọ ka ukwuu.
Iwere nkeji ole na ole ife Chineke ofufe na-echetara anyị ọtụtụ ihe mere anyị ji kwesị ito ya. Anyị enweghị ike ị helpụrị ọ rejoiceụ mgbe anyị chetara ịhụnanya Ya kwesịrị ntụkwasị obi, ike, na agwa adịghị agbanwe agbanwe. Abụ Ọma 104: 33-34 na-echetara anyị na ọ bụrụ na anyị bụọ abụ ruo ogologo oge n’oge ndụ anyị niile, anyị ga-enwe ihe ga-eme ka e too Chineke. Anyị na-echeta ịdị mma ya ma na-elekọta anyị.
Ofufe na-emerụ nsogbu nke iwe. Mee ka uche anyị dị ọhụrụ, nke mere na echiche anyị - onye ọbụ abụ na-ezo aka na “ntụgharị uche” anyị ebe a - ga-atọ Onyenwe anyị ụtọ. Ọ bụrụ nị wepụta oge ito Chineke n'etiti ọnọdụ nhụsianya, nrụgide, ma ọ bụ ọnọdụ ịda mba doro anya ọ bụla ị hụrụ onwe gị taa, Chineke ga-agbanwe akparamagwa gị ma wusie okwukwe gị ike.
Ofufe na-asọpụrụ Chineke ma na-eme ka uche anyị dị ọhụrụ. Kedu maka ịgụ Abụ Ọma nke ofufe taa ma ọ bụ gbanye ụfọdụ egwu Ndị Kraịst? Nwere ike ịtụgharị njem gị, ma ọ bụ oge ejiri rụọ ọrụ ụlọ, isi nri, ma ọ bụ mee ka ụmụ gị maa jijiji, gaa n’oge na-ewuli elu karịa nsogbu.
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ị na-eto ya n’okwu, na-abụ abụ n’olu dara ụda ma ọ bụ n’echiche gị, Chineke ga-enwe obi ụtọ na ntụgharị uche nke obi gị ka ị na-a rejoiceụrị ọ inụ n’ime Ya.
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị amalite ugbu a? Ka anyi kpee ekpere:
Onyenweanyị, ugbu a aga m ahọrọ ịkele gị maka nnukwu obi ọma gị na ebere gị. Know mara ọnọdụ m ma ana m ekele gị na enwere m ike ịnọrọ n'ike gị ma na-echegbu onwe m gbasara akụkụ ọ bụla nke ndụ m.
Chineke, anam ekele gi maka amam-ihe gi, nke mere ka onodu m diri m dika ebube gi ma nyere m aka imata gi nke oma. M na-eto gị maka ịhụnanya gị na-adịgide adịgide, nke gbara m gburugburu n'oge ọ bụla n'ụbọchị. Daalụ maka ịnọnyere m.
Daalụ, Jesus, maka igosi ịhụnanya gị site ịnwụ n’elu obe maka m. Ekene m gị maka ike nke ọbara gị nke na-azọpụta m n ’mmehie na ọnwụ. Echetaram ike nke mere ka Jisos si na ndi nwuru anwu bilie n’ime m iji mee m onye mmeri.
Onyenweanyị, daalụ maka ngọzi na amara ị na-enye kpam kpam. Gbaghara m ma ọ bụrụ na m na-eme mkpesa banyere ọnọdụ m. Ka ntughari uche m taa di gi nma dika m na eto gi ma cheta idi nma gi n’ebe m no.
N'aha Jisos, amen.